EEG SAWIRKA: Haddaad isku daydo inaad ku ooriso Mesut Ozil jawaabta aad ka heli doonto waa midan! – Gool FM
(London) 05 Abriil 2016. Kubbad abuuraha Arsenal Mesut Ozil ayaa bandhig aad u wacan sameeyay kulankii sabtida ay kooxdiisu ka adkaatay Watford, caadi ahaana taageerayaasha Hornets uma ay ogolaaneynin wiilka reer Germany inuu qaato kulan sahlan ciyaartii ku idlaatay 4-0.
Mar uu Ozil soo aaday dhanka koornada si uu u qaado ciyaartii ka dhacday Emirates, taageerayaasha Watford ayaa bilaabay inay ku ooriyaan 27-jirka, balse ugu jawaabay qaab cajiib leh.
Kubbad caawiyaha ugu fiican Premier League waqtigan ayaa shumiyay calaamada Gunners ka hor inta uusan daymo ilqabad ah siinin taageerayaashii ku oorinayay.
Goolal ka kala yimid Alexis Sanchez, Alex Iwobi, Hector Bellerin iyo Theo Walcott ayaa saddexda dhibcood siisay kooxda Arsene Wenger iyagoo wada tartanka horyaalka ay kula jiraan Leicester City iyo Tottenham.
Liverpool oo jaratay tikitkeeda wareega Afarta ee Champions League kaddib markii ay ka soo gudubtay kooxda Benfica
Tababare Carlo Ancelotti oo aan Magaalada London maanta ula safri doonin kooxdiisa Real Madrid
Shaxda rasmiga ah kulanka Kooxaha Lille iyo Chelsea ee tartanka Champions League oo la shaaciyey